Sidee u badbaadin kartaa horumarintayda SEO haddii ay bedesho domainka?
Go'aan fiican oo la sameeyay si loo beddelo magac domain waa mid weyn, waa hubaal. Laakiin iyadoo tixgelineysa shuruudaha cadaadiska ah ee la isku khilaafsan yahay arrimaha miisaaniyadda oo soo ifbaxaya habka dib-u-soo-kabashada buuxda, qaar badan oo naga mid ah ayaa dareemi kara wareer.
Waxaa ka mid ah natiijooyinka ugu roon ee ka dhacaya SEO ka dib isbedelka domain, waa luminta ku meel gaadh ah ee taraafikada dabiiciga ah. Dhibaatada noocan oo kale ah waxaa lagu qiyaasaa 5-20% waxaana laga filayaa gaadiidka bogga, ugu yaraan illaa xilliga bilowga ah illaa 3-4 asbuuc sida caadiga ah ee loo baahan yahay in Google loo xirxiray si loo barto URL cusub, dib u hagaajin, ama wixii kale ee ka baxsan bogga Cusbooneysiin. First of all, dareemo deganaansho, maadaama wakhtigan xaddidan waa in uu hubaal ku filan si loo magcaabo khasaarahaaga. Habkaas, waxaan ku talinayaa inaad codsato olole PPC ah oo lagu beegsanayo magacaaga ganacsigaaga, iyo waliba waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan calaamad laheyn ee lagu raadinayo raadinta.
Inta badan, qaybta libaaxa ee websaydhka iyo horumariyeyaasha webka ayaa bilaabi lahaa in ay qaadan lahaayeen shaqooyinka ka-hortagga daaweynta, bilawga soo kabashada marka ay SEO-ga iyo bedelaan shaqooyinka domain ee horeba loo bilaabay. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale talaabo qaaddo. Waxaan u jeedaa inaad tagto qaar ka mid ah shaqooyinka hordhaca ah ee sameeya sida ugu fiican ee Google looga caawiyo, iyo sidoo kale inta badan makiinadaha raadinta, helitaanka faham wanaagsan oo ku saabsan waxa dhici doona iyo si habboon u falcelin. Sidaa darteed, waxaad sii wadi kartaa horumarkaaga SEO ee is-beddelka domain-ka iyo isbarbardhiga ku wareegsan habka aan caadiga ahayn. Waxaan kugula talinaynaa inaad isku kalsoon tahay sida tababare, kaliya adoo raacaya tallaabooyinkan xoojinta:
Dib u cusbooneysiinta xiriiriyeyaashaada ku saleysan bogagga kale ee hay'adaha maamulka ee maamulka sare waa fikrad qurux badan. Iyadoo aad mashquul ku tahay cusboonaysiinta iyo dib-u-sameynta dib-u-qabsigaaga hadda internetka, waxaad xor u tahay inaad turjumaan baahida loo qabo bedelida domain sida fursado cusub oo cusub. Waxaan loola jeedaa inaad si sahal ah u soo kaban karto taageerooyin cusub oo cusub ilaa todobaadyada ka dib isbedelka domain. Sidaa oo kale, waxaad u diri doontaa calaamadaha saxda ah ee saxda ah iyo Google. Taasna waxaa la siin doonaa rikoodhka sare ee SERPs ka dib dhammaan.
Ha ilaawin inaad ku soo noqotid dib u noqoshadaadii hore ee dib loo soo cusbooneysiiyey URL cusub. Fikradda muhiimka ah ee halkan waa in aad dib u hesho dib-u-hagaajinta buuxda ee dib-u-tayadeedka iyadoo la yareeynayo tirinta jadwalka ee domainka waqti isku mid ah. Adigoo raacaya, raadso internetka adigoo isticmaalaya qalab khaas ah (waxaan isticmaalaa kufsiga), waxaad u heshaa dhabarkaaga awoodda ugu xoogan. Marka ay ku yaalliin, hubi inaad sameyso dadaal dibadda ah adoo adeegsanaya email si aad u codsato wixii cusbooneysiin ah.
Ugu dambeyn, ha iloowin inaad dhiirrigelisid magacaaga cusub ee adoo adeegsanaya kanaalada warbaahinta bulshada. Habkaasi, ka bilow cusbooneysiinta URL-kaaga iyo magaca ganacsiga aadka u ah (haddii lagu dabaqi karo) qaabka ugu caansan iyo tan la xidhiidha. Sidoo kale, waxay noqon laheyd fikrad aad u wanaagsan inaad ku dhawaaqdo isbedelka domain ee dhacdo ku saabsan qaar ka mid ah kanaaladaada warbaahinta bulshada. Taasi waxay kaa caawinaysaa inaad dhageysiga daawadayaasha ku wargeliso in kaliya domainkaaga uu isbedelayo, laakiin qiimaha sare ee alaabtaada ama adeegyadu waxay noqon doonaan kuwo isku mid ah Source .